न्यायालय सुधार्न प्रशस्त काम गर्न नसकेकोमा पीडा हुन्छ – ekarnalikhabar
रेग्मीकै शब्दमा उनको पालामा हद म्याद नाघेको भनिएका थुप्रै भ्रष्टाचार मुद्दाको व्यवस्थापन भयो । नेपाल आयल निगमको भ्रष्टाचार मुद्दामा आफैंले प्रमाण हेरेर फैसला गरे । व्यक्तिगत रुपमा चिन्नेहरु भन्छन्ः रेग्मीको व्यक्तित्व शालिन स्वभावको छ । यद्यपि रेग्मीलाई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश वस्तीलगायतलाई स्थायी नगरेको लगायत आक्षेप न्यायालय भित्र/बाहिर लाग्ने गरेको छ । के चाहिँ सत्य हो भने रेग्मीले उनीहरुलाई स्थायी गरेका हुन्थे भने वस्ती उमेरका कारण वस्ती प्रधान न्यायाधीश हुने थिए । वस्ती प्रधान न्यायाधीश भएका भए न्यायालयले अहिलेको हवीगत भोग्ने थिएन भन्ने आवाज सर्वोच्च अदालत भित्र कुना–कुनामा सुनिन्छ ।
मुलुकमा भएको उथलपुथलकारी परिवर्तनको सन्दर्भमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको आवाज र मुद्दा भनेको न्याय क्षेत्रको रुपान्तरण पनि हो, जुन अझै पनि पेचिलो रुपमा रहिरहेकै छ । यसै सन्दर्भमा परिवर्तित सन्दर्भमा न्यायालय किन रुपान्तर हुन सकेन ? निरंकुश पञ्चायतकालमा समेत आशा र आस्थाको केन्द्रबिन्दू रहेको न्यायालयको साख कसरी गिर्‍यो ? लगायतका प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा केन्द्रति रहेर पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष रेग्मीसँग रातोपाटीले गरेको संवादको सम्पादित अंशः